Markaad aragto khariidadaha aan gunta-galka ahayn - Geofumed
Maaddaama khariidadaha aan gunta ahayn
Febraayo, 2010 Cartografia, Internet iyo Blogs
Si aad u heshid wax yar oo la dareemo, toddobaadkan ayaa la daabacay 20minutos.es maqaal ku saabsan mowduucyada saadaasha, oo leh tiknoolajiga macallinka fasalka lixaad uu sharxi doono markaad ka hadlaysid khariidadaha adduunka.
Waxaa habboon in la fiiriyo faallooyinka, niyadjab - inay yihiin kuwo aad u badan, laakiin halkan waa qaar:
Habka uu weriyuhu ku muujiyo qoraaga arrimaha ku saabsan farsamada waa mid xiiso leh.
Aniga waxay iigu sharaxayaan in ay tahay wax caadi ah
Oo cagahaygana waa ka weyn tahay qorraxda!
Waxaan maanta hubiyay!
Moral (oo ah geodeic): Haddii aad aragto khariidada ha ka fekerin waxa ay sheegayso, haddayan ahayn ciddii samaysay.
adduunku waa biyo ka badan dhulka, mahadnaq, sababtoo ah meerayaasha kale ma laha faa'iidadaas, sidaas awgeedna nolol maaha.
Kala badana kama ogaan doono halka Greenland ay tahay ... daqiiqo XNUM, waxaad waydiisaa wax badan!
Xaqiiqadu waxay tahay in Spain oo ku jira juquraafi ahaan juquraafi ahaan ay tahay keliya **.
Haddii kaliya juquraafi ahaan ...
Dhulku waa saddex-dhinac oo aan suurtagal ahayn inuu matalo diyaaradda. Isku dheji naftaada waan ku qabtaa ...!
Waa wax aan macquul aheyn in wakiil ka ahaato inay wakiil tahay tan iyo markii uu nin yahay nin. Waa maxay sheeko nacas ah!
Anigu ma ogi goor hore ayaan ahay!
WAA MAXAY SIDA AAD U HESHIISAY!
Anigu waan gaadhi doonaa news kale, oo ayan ku jirin dhulka waa godan, ka dib markii saliid walba ay helaan, waxaan rajeynayaa in qof qabaa karaa X-ray ka hawada, sababtoo ah markaas haddii aannu ku soconnaa in lagu cabsiiyo.
Waa maxay wargeysyada ay sameeyaan Wikipedia la'aan?
Waxaad qaadataa Google Earth oo aad aragto in ka badan ama ka yar saamiyada.
20 daqiiqo, waxaan idin siin doonaa oo kale ugu horeysay ee post in ay hore: Waxaan qabaa Chinese ah waxay leeyihiin laba hindisooyin cusub oo cajiib ah: mid waa irbad had iyo jeer ku fiiqay xagga woqooyi, oo midda kalena waa budada madow in deflagrates, iyo haddii Waxaad gelisaa boorso yar, adiguna dhuujiso, waxuu qarxaa wuxuuna burburin karaa waxyaabo.
Khariidadda ugu fiican waa khariidadda kintirka oo ay sameeyeen wasiirkii ugu sarreeyay ee sinnaanta (xusuusnow codka sarcasm).
Ma waxay u badalaan Tilmaameedka injineerka?
Jasiiradaha Canary ayaan sida ugu dhow ee Spain iyo meelo ka fog Brazil sida muuqata. Xaqiiqdii, sannado badan ka hor duullimaadyadu waxay sameeyeen safarkan si ay u dhaafaan balli.
Xitaa geoid ah iyo walax, ayaa wakiil kaa noqon kara 2D hubi kalsoonaan karo, wax kale waa inaan ninna fahamsan yahay sida map ka loo geyn lahaa, laakiin hey, waxaan shaki in samaynta 3D matalaad leh "sax" ah tallaabooyin aan noqon ka dibna qaado diyaarad leh kala jarasho kala duwan oo ku biiray:
Sidaas awgeed kintirka ayaa aan hoos u dhicin, waa inaan anigu u arko sidaan oo kale khariidadkayaga khaanadaha, sababtoo ah maaha mid toos ah ... sida aamusnahay!
Waxyaabaha wanaagsan ee aan helay Buzz, iyada oo loo marayo Jorge, (ma aha abaalmarinta) :)
Post Previous«Previous Halkee ayaa isticmaala Manifold GIS?
Post Next GPS Babel, ugu fiican ee lagu shaqeeyo xogtaNext »
Hal Jawaab u Jawaab "Markaad aragto khariidadaha aan shaxanka lahayn"
Angie isagu wuxuu leeyahay:
Febraayo, 2010 at
Anigu waan qosliyay! Waxaa hubaal ah in dadku wax walba u baahan yihiin!